रोचक घटनाः श्रीमानको लिङ्ग सानो भएको भन्दै सम्बन्ध विच्छेद ! - Taja Report
Homeसमाचाररोचक घटनाः श्रीमानको लिङ्ग सानो भएको भन्दै सम्बन्ध विच्छेद !
रोचक घटनाः श्रीमानको लिङ्ग सानो भएको भन्दै सम्बन्ध विच्छेद !
July 8, 2018 समाचार Comments Off on रोचक घटनाः श्रीमानको लिङ्ग सानो भएको भन्दै सम्बन्ध विच्छेद !
सुनसरी । समाजमा सम्वन्धका विच्छेदका अनेकन उदाहरण पाइन्छ । सम्वन्ध विच्छेद हुनुमा पारिवारिक बेमेल, हिंसा, अनमेल बिवाहकासाथै इच्छा विपरित गरिएका विवाह जस्ता कारणहरु प्रमुख कारकका रुपमा रहँदै आएका छन् ।
तर सुनसरीमा सम्वन्ध विच्छेदको फरक प्रसंग सार्वजनिक भएको छ । श्रीमानको लिङ्ग सानो भएको भन्दै श्रीमतीले सम्वन्ध विच्छेदको माग गरेपछि पञ्चभेलाले दुवैलाई अलग हुने बाटो खोलिदिएको छ । विवाह भएको ६ महिना सम्म राम्रो सम्बन्ध रहेको जोडीमा तव खटपट सुरु भयो । जब श्रीमतीले आफुलाई यौन सन्तुष्टि नपुगेको भन्दै श्रीमानसँग सम्वन्ध बिच्छेदको माग गरिन् ।
परिवारमा कलह बढ्दै गएपछि बाहिरिएको सो विषय अन्ततः वडा कार्यालय सम्म पुग्यो । वडाध्यक्ष सहितका जनप्रतिनिधि लगायत सामाजिक अगुवाहरुको उपस्थितिमा डाँकिएको भेलामा महिला र पुरुष दुवैले आआफ्नो समस्या राखे ।
भेलामा श्रीमानले राम्रोसँग पाल्दै आएको र कुनै दुःख नदिएको बताइरहेपनि श्रीमतिले श्रीमानले आफ्नो यौन इच्क्षा पुरा गर्न नसकेको, श्रीमानको लिङ्ग सानो भएको र आफ्नो इच्छा आकांक्षा दबेको भन्दै सम्वन्ध बिच्छेद बाहेकको विकल्प नरहेको अडान लिएकी थिइन् ।
वडा सदस्य समेत रहेका इनरुवा नगरपालिकाका न्यायिक समिति सदस्य रञ्जेश भट्टराईले सम्वन्ध बिच्छेदको घटनाको प्रकृति फरक र अचम्मित पार्ने खालको भएको बताए । भट्टराईका अनुसार आफ्नो व्यथा दुबैले पोखेका थिए । सदस्य भट्टराईका अनुसार भेलामा उपस्थित रहेर महिलाले विवाह भएको लामो समयसम्म श्रीमानबाट यौन सन्तुष्टिको आशा राखेर घरजम गरी बसे पनि श्रीमानबाट यौन सुखको अनुभुति पाउन नसकेपछि बुढाबुढीबीचको गोप्य कुरो समाजमा ल्याउन बाध्य भएको भन्ने विषयको खुलासा गरेकी हुन् ।
श्रीमतीले आफुले श्रीमान छाड्न चाहेको बताएपछि समाजले दुवैको मञ्जुरीमा सम्वन्ध विच्छेदको बाटो खुल्ला गर्दै आपसी रुपमा छुट्टिने निर्णय गरिदिएको छ ।
वडाध्यक्ष सुरेन्द्र यादव श्रवणले वडामा दुई वटा सम्वन्ध विच्छेदका घटना महिलाको इच्छा अनुरुप आपसी मञ्जुरी कायम गरी भएको बताए । महिलाले स्वयं आफु बस्न नचाहने भन्दै यौन चाहना पुरा गर्न नसकेको कारण देखाएपछि समाजका अगुवाहरुको रोहवरमा सम्वन्ध विच्छेदको बाटो खुल्ला गरिदिने गरेको यादवले बताए ।
फेसबुक चलाउने सम्पुर्ण नेपाली दिदीबहिनीहरुले एक पटक पढ्नै पर्ने साथै जनचेतनाको लागि शेयर पनि गर्नै पर्ने कुरा !!
आजकाल फेस्बुक सबैको प्रिय साथी जस्तै भैसकेको छ । फेस्बुक शहर बजारका युवायुवतीले मात्र नभई गाउँ घरका सर्ब साधारण ब्यक्तिले पनि चलाइरहेको छ ।
फेस्बुक चलाउन जान्दा राम्रो अनि काम लाग्ने चिज पनि हो तर नजान्दा यो फासिको फन्दा पनि हो। विशेष गरि नेपाली युवतीयुवतीहरुको लागि यो फेस्बुक आज्काल दल्दल्मा फस्ने फन्दा बनेको छ । तर यो सब आफ्नै गल्तिले गर्दा हुने भएकोले सम्पुर्ण नेपाली दिदीबहिनीहरुले सजकता अपनाउनु जरुरी छ । तल दिएको सुचनालाइ ध्यानमा राखेर फेस्बुक चलाउन हुन सम्पुर्ण दिदीबहिनीहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।
सम्पुर्ण फेस्बुक चलाउने छोरी चेलिलाई सूचना !
(१)फेसबुक साथीहरू लाई फोन नम्बर नदिनुस
(२)फेसबुकका साथीहरू लाई एकान्तमा नभेट्नुस
(३)फेसबुक साथीहरू लाई मीठो गफ नगर्नुस
(४)एकान्तमा भेट्नु बोलाउदा साथी संग जानुस
(५)सबै नराम्रो हुन्न तर सबै राम्रो पनि हुन्न
(६)यो internet संजाल हो, अपराधी चिन्न गार्हो हुनेछ
(७)Chating मा sexy photos आदान प्रदान नगर्नुस
जसले (बलात्कार )गर्न केटा हरूलाई उक्साहट नहोस
माया प्रेम गर्नुस तर घरपरिवार को सल्लाह सम्पर्कमा हुनूस
(८)नत्र शिकारी ले सिकार लाई गिद्धेनजर लगाउलान
शिव मन्दिरमा चमत्कार: शिवलिङ्गको आकार बढ्ने देखि रंग बदल्ने मन्दिर, बैज्ञानिक समेत चकित
नेपालको पशुपतिनाथ शिव मन्दिरहरुमा विश्वकै सबैभन्दा चर्चित मानिन्छ। भारतमा पनि कैयौ प्रचलित अनौठा शिव मन्दिर छन् । केहि त्यस्ता मन्दिर छन्, जसको नाम र संरचनाको पछाडि विभिन्न रहस्य लुकेको मानिन्छ । यी मन्दिरमा कहिलेकाहि चामत्कारिक घटना घट्ने बताइने गर्छ ।
उडिसा क्षेत्रमा पर्ने मुर्गा महादेव मन्दिर –यस मन्दिरको छेउमा १५ फिट माथिदेखि बाह्रैमहिना झरना बग्दछ । शान्त वातावरणको विचमा बग्ने यस झरनामा विभिन्न जलचरा हेर्न आउने तिर्थालु तथा अन्य व्यक्तिको भिड लाग्ने गर्दछ ।
मुर्गा महादेवको अर्थ क्रान्तिमय शिव भन्ने हुन्छ । यो एक प्राचीन स्थल हो । यस क्षेत्रमा पहिले आदिवासिको पुजा हुने गर्दथ्यो । त्यसपछि हिन्दुधर्मावलम्वीको तिर्थस्थल बनेको जनविश्वास छ ।
विजुली महादेव यस मन्दिरमा हरेक बाह्र वर्षको एकपटक शिव लिंगमा विजुली चम्कन्छ । त्यसैले यसलाई विजुली मन्दिर पनि भनिन्छ । कुल्लु शहरस्थित व्यास तथा पार्वती नदिको संगममा विजुली मन्दिर रहेको छ । समुद्रीसतहदेखि २४५० उचाइमा रहेको यस मन्दिरमा शिवभगवानको मुर्तीमा सर्फको माला लगाइएको छ ।
बाह्र वर्षको एकचोटि भीषण वर्षा र चट्याङ पर्ने यो मन्दिर चट्याङपछि टुक्रा टुक्रामा विभाजित हुन्छ । सो मूर्ति फेरी जोडिने विश्वास गरिन्छ।
मलेश्वर महादेव मन्दिर यहाँ २०० ग्राम तौलको ५००० वर्ष पुरानो गहुँको दाना जस्तो शालीग्राम छ । यो हिमाञ्चल प्रदेश क्षेत्रमा अवस्थित छ ।यसमन्दिरभित्रमा रहेको चामत्कारिक भुतेश्वरनाथ शिवलिंगको लम्वाई हरेक वर्ष बढ्दै जान्छ । १८ फिट अग्लो र २० फिट चौडाई भएको यो मन्दिरको शिवलिङ्ग वर्षेनी बढ्दै गइरहेको बताइन्छ ।
कमलानाथ महादेव मन्दिरमा भने भगवान शिवको पूजा गर्नु पूर्व रावणको पुजा गरिन्छ । यस प्राचीन मूर्तीको स्थापना रावणले गरेका थिए । त्यसैले शिव भगवानको पूजा गर्नुपूर्व रावणको पूजा गरिन्छ । रावण शिवको ठूला भक्त थिए।
सोहि स्थानमा रहेको स्तम्भश्वर मन्दिर भने हेर्दाहेर्दै विलीन हुन्छ । गुजरातस्थित समुद्रको विचमा रहेको यो मन्दिर हेर्दाहेर्दै विलीन हुन्छ भने केहि समयपछि फेरि सोहि ठाउँमा देखा पर्ने बताइन्छ । यस मन्दिरको यात्रा समुद्रको छाल कम भएपछि मात्र गर्न सकिन्छ ।
यस्तै राजस्थानमा रहेको अचलेश्वर महादेव मन्दिर दिनमा तिनपटक विभिन्न रंगमा बदलिन्छ । शिवको मूर्ती विहान रातो रङको हुन्छ, दिउसो पहेंलो र साँझ कालो रङमा बदलिन्छ । यो मूर्ती सतहमुनीबाट बाहिर निस्किएको छ ।
लक्ष्मणेश्वर महादेवमा लाखौै छिद्र भएको शिवलिंग रहेको छ । यसको स्थापना लक्ष्मणले गरेका थिए । यसलाई लक्षलिंग भनेर पनि चिनिन्छ ।
क्यामरामा रेकर्ड भएको यस्तो घटना जुन तपाई देखर पनि बिस्वास गर्न सक्नुहुन्न (भिडियो सहित)
हस्तमैथुनको बानी छुटाउन के गर्ने ?